Misotro mofomamy spaonjy yaourt misy vera voankazo maina | ThermoRecipes
fitsangatsanganana55 minitraOlona 12190 kaloria
ny Ascen Jiménez
Ny mofomamy androany nataonay miaraka amin'ny yaourt misy rano. Ireo karazana yaourt, na tsindrin-tsakafo hosotroina ireo, dia mazàna manana tsiro mahery vaika izay, arakaraka izay safidintsika, no miova ny tsiron'ny mofomamy misy antsika.
Ety ambonin'ny no nasiantsika tsotra glaoma voankazo maina. Nampiasa voanjo rakotra tantely sy sira aho fa afaka mampiasa voa voajanahary koa ianao.
Tsy dia matevina ny koba mofomamy ary izany no antony mirona any anaty ny ranomandry. Ny mofomamy dia hanana loko roa samy hafa sy tsiro roa samy hafa. Apetaka amin'ny vilan'ny mofomamy ny gilasy alohan'ny handrahoana azy ary azo ampiasaina mihitsy manaova sary eo amboniny.
1 Mofomamy spaonjy miaraka amin'ny yaourt fisotro sy vera maina
Mofomamy spaonjy miaraka amin'ny yaourt fisotro sy vera maina
Mofomamy tena tsotra vita amin'ny yaourt misy rano.
Fotoana manontolo: 55M
Ho an'ny icing:
Voanjo 100 g (ny ahy rakotra tantely sy sira)
Fotsy atody 1
Atody 3 sy yolk 1
Yaourt misy rano 240 g (yaourt hosotroina)
sira kely iray
Ny hoditra sy ranom-boasarimakirana 1/2
Menaka tanamasoandro 85 g
260 g ny lafarinina
Valopy 1 misy masirasira karazana
Apetrakay ao anaty vera ny voanjo. Izahay dia manao fandaharana 6 segondra, hafainganam-pandeha 6-8. Izahay dia mitazona ao anaty lovia.
Ampifanentintsika amin'ny lelany ny lolo (tsy ilaina ny manasa ny vera aloha). Napetrakay tao anaty vera ireo atody 3 sy yolk 1 (notehirizinay ny fotsin'io atody fahefatra io mba hanomanana ny glasy). Izahay dia manao fandaharana 3 minitra, hafainganam-pandeha 3.
Ampianay ny yaourt, ny sira, ny hoditry ny antsasaky ny voasarimakirana, ny ranony ary ny diloilo. Izahay dia manao fandaharana 8 segondra, hafainganam-pandeha 3.
Esorinay ny lolo. Ampio ny lafarinina sy ny masirasira. Izahay dia manao fandaharana 10 segondra, hafainganam-pandeha 5.
Napetrakay tao anaty lasitra 22 santimetatra eo ho eo ny savaivony, ary nohosorana menaka teo aloha.
Mba hamaranana ny fikarakarana ny ranomandry, afangaro ny fotsy atody izay notehirizinay niaraka tamin'ny voa izay nolalantsika tamin'ny voalohany. Azontsika atao ny mampifangaro azy amin'ny tsorakazo na sotro.
Izahay dia mizara ny lohanay miaraka amin'ny sotro eo ambonin'ny paty mofomamy.
Mofomamy amin'ny 180º (lafaoro efa nafanaina) mandritra ny 45 minitra. Amin'ny tsorakazo misy totozy dia azontsika atao ny manamarina raha voaendy tsara izy (hitranga raha manindrona ny mofomamy ianao dia mivoaka madio ny tehinay.
Azontsika atao ny manosotra ny hoditry ny voasarimakirana antsasaky ny vera, alohan'ny hanombohana amin'ny fomba fahandro. Tsy mila mametraka ny mavo amin'ny hoditra amin'ny vera fotsiny isika ary mampandeha haingam-pandeha haingam-pandeha na kapoka turbo maromaro mihitsy aza. Aza adino fa ny ampahany mavo ihany no mahaliana antsika (ilay faritra fotsy amin'ny hoditra hialantsika satria mangidy)
Fanazavana fanampiny - Ahoana ny fanaovana sary ny voninkazo amin'ny mofomamy
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Thermorecetas » General » Sponjy mofomamy misy yaorta hosotroina
ANGELINA dia hoy izy:
Toa tsara izany, saingy manana fanontaniana aho: ao anaty gilasy, alohan'ny fampifangaroana ny fotsy amin'ny voanjo, tsy tokony hokapohina ve izy?
Valiny amin'i ANGELINA
Ascen Jiménez dia hoy izy:
Ny fampifangaroana azy tsara amin'ny sotro na sotro dia ampy.
Cheesecake miaraka amin'ny Blueberry
Manaiky ireo fepetra aho